राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र युनिसेफ नेपालको संयुक्त वक्तव्य
निर्वाचन अघि, निर्वाचनको बेला र निर्वाचन पछि बालबालिकाको सम्भाव्य दुरुपयोग बारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र युनिसेफ नेपालको संयुक्त वक्तव्य
राजनीतिक क्रियाकलापहरूमा बालबालिका तथा विद्यालयहरूलाई संलग्न गराउने विभिन्न राजनीतिक दलहरूको योजना भएको प्रतिवेदनहरू आउने गरेको सन्दर्भमा मुलुकमा राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन अघि र निर्वाचन पछिका अभियानमा बालबालिकालाई दुरुपयोग गर्ने, झुक्याई, फकाई प्रभावित गर्ने र त्यस्तो गतिविधीमा संलग्न गराउने सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालकोष (युनिसेफ) नेपाल चिन्तित छन् ।
मध्यान्हको समय थियो । चर्को घाम लागिरहेको थियो ।
कक्षा ४ का विद्यार्थीहरु कक्षा कोठाभित्र खुबै हल्ला गरिरहेका थिए । हा–हा हु–हु गर्दै उनीहरु कक्षा थर्काउँदै कराइरहेका थिए ।
ट्वाङ्ट्वाङ् घन्टी लाग्यो । कृष्ण सर कक्षा कोठाभित्र छिर्नु भयो । सबै विद्यार्थी गुड आफ्टरनुन सर भनेर एकैसाथ उभिए । उहाले ल ल ठीक छ बस बस भन्नु भयो ।
सबै विद्यार्थी एक साथ बसे । सर कालो पाटीमा लेख्न थाल्नु भयो । विद्यार्थीहरु फेरि हल्ला गर्न थाले । सरले रिसाउ“दै विद्यार्थीतिर फर्किएर भन्नु भयो – ए एकछिन हल्ला नगर त
चिसो झोल कोल्ड ड्रिङ्कमा फोस्फोरिक अम्ल धेरै मात्रामा हुन्छ । यस अम्लले केटाकेटीको हाडलाई कमजोर पार्छ । यही भएर इन्डोनेसियाको सरकारले चिसो झोल कम्पनी सरकारी चेतावनी पनि दिएको थियो । सन् १९६९ मा जाम्बिया नामक देशमा एउटा घट्ना नै घट्यो । त्यहाँका आमाहरूले कोक र फेन्टालाई उत्तम झोल ठानेर स्तनपान गराउँनुको सट्टा आफ्ना केटाकेटीलाई खुवाएछन् । त्यही कारण धेरै बच्चाहरू कुपोषण भएर अस्पताल भर्ना भएका थिए । ती मध्ये चौवन्न प्रतिशत केटकेटीलाई चिसो झोल खुवाइएको थियो । यसरी कुपोषित भएका बच्चाहरूको नाम फेन्टा बेबी भनी नामाकरण गरिएको थियो ।
बादलको देशमा नेपाली जुनियर जेम्स
बादलको देश र सगरमाथा हिमालको काखको रमाइलो र रोमान्चक कथा भएको पुस्तक नेपाली जुनियर जेम्स यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । यसका लेखक कार्तिकेय हुन् । यो पुस्तकको प्रथम संस्करण जिलेट पब्लिकेसन्सबाट प्रकाशित भएको थियो । वि. सं. २०५८ मा दुई भागमा प्रकाशित यो कृति बालबालिकामाझमा रुचाइएको थियो । अहिले यस कृतिको दोस्रो संस्करण विद्यार्थी प्रकाशन भोटाहिटी, काठमाडौंबाट प्रकाशित भएको छ । विद्यार्थी प्रकाशनको फोन नं. ९७७ ०१ ४२२७२४६ हो । त्यस प्रकाशनबाट कार्तिकेय लिखित अन्य विभिन्न शीर्षकका १९ वटा कृतिहरु प्रकाशित भएका छन् ।
- महेश पौड्याल
विप्लव कक्षा ५ को एक विद्यार्थी
विष्णु नेपाली भाषा शिक्षक
शशी उनका आठ वार्षे छोरो
आकाश शशिको सुसारे केटो
स्थान प्रिन्सिपलको कोठा
सेराफिम्स पब्लिक स्कुल, कालिमाटी, काठमाडौंमा अध्ययनरत बालबालिकाहरुको रचनाहरु
खुश्बु जयसवाल, कक्षा ५
सबै भन्छन् बालअधिकार आयो
खै त्यो अधिकार कसले पायो ?
म जस्तै बालक मागिरहेछन् सडकको माझ
खुल्ला आकाशमा बिताउँछन् उनीहरु रात
हाम्रो आवाज यहाँ कसले सुन्ने ?
भोट नदिने बालबालिकालाई कसले गन्ने ?
सडकको साथीलाई नि राम्रो शिक्षा देऊ
उसको बालअधिकार उसलाई फर्काइ देऊ
आजको बालक नै हो भोलिको कर्णधार
फोहोर बोक्न लगाएर नपार उसको जीवन अन्धकार ।